Dubartii Jeezebeel Jedhamtu sana. BNL Ministries - om18
Dubartii Jeezebeel Jedhamtu sana.
Nabiyyiin Jamsi, haxiyaatiin waan nutti fiduu danda’u nutti agarsiisee jira.
“garuu namni kamiiyyuu iddoo jireenya isaatii yommuu ari’amuu yaadda’uun isaa hin oolu,cunqursaan yoommuu hammatuu gara baqaliitti deema, baqaliin immaa deeme deemee haxiyaati ta. a dhumni haxiyaati immoo du’a,”
Amma, fakkii sirri waan yeroo ammaa manneen amantaa keessatti ta’aa jiru dha. dharri akka dhayata keessatti jalqabetti, duuti manneen amantaas akka salphaatti, beeksisa xiqqoo nikoolaansif kenne. Yaada irra gara hariirootti deemee jira. Hariiroon kun human mootummaa godhatee gabaabdummaa fide. Bara kana keessatti karaa ofiitiin barsiisaa ture, haaluma kanaan itti fufaa ture hangaqaama bishaani keessatti of arguutti, bakkeen kun bakka itti dhaabu barbaadu ture, du’a isa lammaffaa keessatti.
Ammaa booti gara waaqayyotti godhamu inni waggaa afraffaan barsiisa jazabeel keessatti moggaasee ture. Akkamitti haala saniin ishee dhoksee sirritti hubachuuf, seenaa ishee kitaaba qulqulluu keessaatti ilaalu qabna, waan isheeen achitti hojjatte yoo argine, kana booda waan amma dalagamuu hubachuun nu hin dhibu. Wanti duraaa fi baay’ee barbaaachisaan waay’ee Jaazabeel hubachuu qabnu keessa Abrahaam irraa akka hin dhalanne dha. akkasumas, hafuura qulqulluudhaan gosa Israaa’elin makaa akka Ruutii kan hin qabneedha. Dubartiin kun Ethibaaal irraa dhalatte, mooti siidoon [mootii 16:31], qeesicha kan turee dha. Mooticha isaan duraa, Feelas ajjeesuudhaan kan aangoo kan argate. Kanaafuu kanarraa wanti hubachuu dandeenyuu, isheen ajjeesssa irra akka dha. kun waan baay’ee nu yaadachiisuu ni danda’a. karaan isheen Israa’elootatti makamte kara seera qabeessa ta’e waaqayyo eeyyameeni miti, Ahaab, mootichi Israa’eel waan ishee FUUDHEEFI dha.
Amma walitti dhufeenyi kun akka hubannetti hafuura qulqulluudhaani miti, haala siyaasaatin ture. Kanaafuu, dubartiin warra Israa’elotaatti makamte tun barsiiftu wangeela waaqayyo guddaa tokkoo ta’uuf fedhii hin qabdu ture. Ummata Israa’elii kara dhugaa waaqayyoo irraa dabsuuf malee. Amma, Israa’el [gosootni kurnan] seerotni qaaqayyoo yeroo itti himaman ta’uu ni beeku, yeroon kun seetonni Muusee fudhatama argatanii dha. Garuu, Ahaab erga Jaazebeeliin fuudhee booda, guddini aadaan buluu hir’achaa dhufe. Erga dubartii n tun barsiiftuu wangeela taatee booda utubaa seexanaa mana amantaa keessattii dhaabu waan dandeeessef Israa’el jireenya ishee keessatt bakka rakkoo ta’uu dandeesse jirti.
Kana sammuu keenya keessatti qabachuun, hafuurri waaqayyoo bara tiyaatiraa kana keessatti maaal akka ta’e ilaaalu ni dandeenya. kana fakkaata.
Ahaab Jaazabeeliin fuudhu kan danda’eef siyaasa isaa jajjabeessuu fi mootummaaan isaa akk yeroo deeraaf turuuf. Kun yeroo baay’ee manneen amantaa mootiin isaani fuudhuu agarsiisanii dha. Waaay’ee hafuura qulqulluu xinnoo irra buusanillee kan wal fuudhan garuu siyaasa isaani midhaassuuf. Amma, eenyulle Konstaantinoon kiristaana ture jedhee na amansiisuu hin danda’u. Nama amantaa hin qabne kan kiristaana fakkaatuudha malee. Bakka jireenyaa hidhattootaa irratti fannoo adii dibe. Argama xiyya kolomboosiif sababa kan ta’e isa. fannoo dugda ST soofiyaa kaasuudhaan aadaadhaan akka bultuu kan godhe dha.
Namoonni amantaa hin qabne, kiristaanonni sobaa fi dhugaa walitti akka qabaman yaada kan fidee Konstaantinoosii dha. kiristaanota addunyaa gara garaattii faffaca’an walitti fiduudhaa yeroodhaaf kan milkaa’eef fakkata ture. Gara dhugaatti deebisuu akka hin dandeenye yeroo hubatan, karaa siyaasaatiin namoota amansiisutti ka’an. Kana immoo raawwachuu yeroo jalqan itti beekkamee qabaman.
Mee kana booda waan baay’ee wal nu fakkeessu haa jedhu. Namoonni hunduu gara tokko dhufaa jiru. Kitaaba qulqulluu nam walitti hidhu amanta Jew, Kaatoliki fi Pirootestaantiin barreessaa jiru. Hojii gaggeessituu mataa isaanii ni qabu garuu ikumenikaal jedhanii moggaasani jiru. Garuu qaamonni kunniin eenyu wajjiin akka wal dhaban beektuu? Peenxeeqosxee isa dhugaa waliin wal dhabaa jiru. Dhaaba peenxeeqoosxee jechamu jechaaa hin jiru. Kan ani jedhaa jiruu, namoota hafuura qulqulluun guutamanii peenxeeqosxee ta’aniif. Namoonni kunniin mallattoo kenna waaqaa sammuu isaani keessaatti qabatanii karaa dhugaa waan deemaniifi dha.
Yeroo Ahaab sababa siyaasaatiif Jeezabeeliin fuudhuu mirga dhalatummaa isaa gurguree ture. Qaama tookkotti erga dhiyaatteen booda mirga dhalatummaa kee, obboleessa kee, amantes amanuu baattes ni gurgurta. Prootestaantonni hundi as dhufaa deebi’an muluunuu mirga dhalatummaa isaani ni gurguru, yoo mirga dhalootummaa kee gurgurte, eenyummaan kee Esau-ni boossa, waan barbaada hunda ni dhabda, garuu waan si milkeessu danda’uu miti. Wanta godhuu dandeessuu tokkoo qofatu jira kunis,’’ Esee keessa ba’ii koottu,ummattan koo, hamaa eshee hin hiratinaa!’’, Amma ani sirrii miti jettee yoo yaadde, gaaafii kana ofii keetiif deebisii. Namni lubbuun jiru kamiiyyuu manni amantaa yookaan bakkeewwan sochii waaqayyoo deebi’ee dhufuu isaa erga esheen dhaaba sana seentee fi mana amantaa ta’e? seena kee dubbisi, waan tokko qofa arguu hin dandeessu-tokkoyyu.
Halkan jidduu ture Yeroo Israaa’el waay’ee amantaa siyaasaaf dhiiftee addunyaatti makamtu. Halkan walakkaa ture Nkaayyaatti, manneen amantaa waan wal fakkaatu yero raawwatan. Ammas halkan gidduudha manneen amantaa kan waliitti gurmaa’an.
Amma, Ammaa Jaazabeeliin erga fuudhe booda, qarhsii mootummaa akk fudhattee manneen waaqeffannaa gurguddoo lama akka ejaarsiftu eeyyameef. Akkasumas, konstaantinoo fi manni amantaa wal fuudhan, mana amantaa ijaarame kennee kana boodas sadarkaa baasuudhan fakiiwwan adda addaa waan kana mirkaneessan qopheesse ture.
Jaazabeel human mootommaa erga argatteen booda, amantaa akka fudhatan ummata dirqisiisuudhaan namoota wangeela waaqayyoo barsiisan ajjeesuu jalqabde. Wanti kun ergamaa yeroo sana kan ta’e Elaajiyaaf mijaawa hin turre, kan hafe ia qofa ture gauu namoota 7000 kan ta’an Baaliif hin jilbiiffanne ture. Manneen amantaa gara gara yerooa sana kan turan kan akk Baabtistii, meetoodistii, pireestiraantota fi kkk, keessaa bahanii karaa waaqayyo kan qabatan ni jiru ture. Ani Ummataan faallaa akka hin taane beekuu ni barbaaddaa. Amantaawwan gara gara faalla haala qindoomina isaaniti malee. Faalla isaani ta’uutu narra eeggama.
Mee amma yeroo muraasaaf asitti haa dhaabnuuti, waay’ee barsiisa waaqayyo tiyaatraa keessaatti adeemsifame waa haa jennu. Isaan kan barsiisan waay’ee Appoloo [ilma seexanaa kan ture] bulchaa biyyaa wajjiin ture jedhee himee jira. Amma Appooloon kun ‘’faalla yaada seexanaa ture.’’ Seexana ummata biraa ari’e. Ummata offolche, waaqa dhugaa isaanis ture. Ummata ni barsiisas jedhamee amanamee ture. Waay’ee wangeela, gocha fi adeemsa waaqayyoo ebsa gahaa kenneef. Waaqa koo!, waan ta’e argitanii? Mirkaneessituu Jaazabeel jedhamtu ummatas barsiisaa jirti. Barsiisni ishees namoota waaqayyo waay’ee saalaati, wal qunnamtii saala akka adeeemsisanis sababa ta’aa jirti. Amma, soba barsiisuu jechuun, ‘’barsiisa haala hin qabne jechuu dha.’’ Kun kara hafuura qulqulluuti yoo hiikkamuu dha. Kun walitti dhufeenyaa seeraan alaati. Walitti dhufeenyi Ahaabi fi konstaantiinoo lamaanu seeraan ala turan. Lamaanu amantaaa isa dhugaa barbadeessanii jiru. Namni dhugaa barbadeessae hundinuu galaana ibbiddatti darbama. Waaqayyolle kanum jedhe.
Download... Jezebel Religion. (PDF English)
Nama mo'uuf, isa hojii koo hamma dhumaatti eeggatee hojjetuufis, saba hin amanne baay'ee irratti aboo nan kennaaf.
Inni siiqqee sibiilaatiin saba sana in tiksa, akka qodaa suphees isaan in hurreessa.
Akkuma ani abbaa koo biraa aboo fudhadhes bakkalcha barii nama sanaaf nan kenna.
Mul’ata Yohannis 2:26-28